मेलाम्चीको पानी : हस्तक्षपकारी भुमिका जरुरी – Rajdhani Daily
मेलाम्चीको पानी : हस्तक्षपकारी भुमिका जरुरी
राजधानीबासीलाई पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले १७ वर्ष अघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अझै पूरा भएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनास्थलमै पुगेर जतिसक्दो छिटो काम सक्न निर्देशन दिएपछि आउँदो दसैंभित्रमा पानी खान पाइने आश बढेको छ । तर, यसरी आयोजनास्थलमै गएर काम छिटो सक्न निर्देशन दिने देउवा नै पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा हुन अझै केही समय कुर्नैपर्ने निश्चित छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकार सहयोगका लागि तत्पर भएको भन्दै काम चाँडोसक्न निर्देशन दिएका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि काममा ढिलासुस्ती हुँदा काठमाडौबासीले १७ वर्षदेखि आशैआशमा बिताउनु परेको छ । २७ किलोमिटर सुरुङमध्ये अझै दुई किलोमिटर खन्नै बाँकी छ भने खानेपानीको धारा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अर्को दुःखको कुरा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको इटाली सिएमसी कम्पनीले रकम नदिएको भन्दै सप्लायर्सले आयोजनाका लागि आवश्यक सामान उपलब्ध गराउन बन्द गरेका छन् भने भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकारले तत्कालै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनु वा काम छिटोसक्न निर्देशन दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा भनेकै समयमा काम फत्ते भन्नेमा आश्वस्त भने हुन सकिँदैन । सामग्री सप्लायर्सलाई इटाली सीएमसी कम्पनीले किन समयमै रकम उपलब्ध नगराएको हो ? यथार्थ बुझेर दोसीलाइ कारवाही हुनुपर्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौंबासीका लागि आशाको त्यान्द्रो संगै मजाकको विषय पनि बनेको छ । १७ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको आयोजना अझै निर्माण पूरा नहुनुले हाम्रो निर्माणको गति कस्तो छ छर्लङ्ग हुन्छ । एउटा खानेपानी आयोजना निर्माणमा हामी दुई दशक खर्चन्छौं भने ठूला हाइड्रोलगायतका आयोजना निर्माणमा हाम्रो गति कस्तो हुन्छ ? यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्प तत्कालका लागि छैन । जसरी भए पनि यो आयोजनाको बाँकी काम निर्धारित समयमा पूरा गर्नैपर्छ । हिजो काम किन ढिला भयो ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । आस्वासनका पोकाले पानीका रित्ताभाडा त भरिन्न नै तिर्खा पनि मेटिन्न । मेलाम्चीलाइ तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा बलियो अनुगमन संयन्त्र ततकाल वनाइनु पर्छ । समितिले निरनतर अनुगमन गरी निर्माणमा परेका बाधा फुकाउने र काममा ढीलासुस्ती गर्नेलाइ तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ । नत्र मेलाम्चीको पानी उपत्यकावासीका मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।